NLD & Media | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » NLD & Media
NLD & Media
Posted by kai on May 11, 2012 in News, Politics, Issues, Press Announcements | 36 comments
“NLD လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူက Weekly Express Times မှသတင်းထောက်အားကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျုးလွန်ခြင်းနှင့်မီဒီယာသမားများကိုစော်ကားပြောဆိုခြင်းကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်NLDသို့ပေးပို့ထားသောစာ”
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် မှာတင်ထားတာကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်..။
http://www.facebook.com/pages/Messenger-News-Journal/127099574018030 မှ ကူးယူတာဖြစ်ပါကြောင်း..။
NLD ကပြောတော့ ဟုတ်ဘူးဆို …. ဘယ်ဟာအမှန်လဲ… သိတော့ဘူး…
မဟုတ်ပဲနဲ့ တော့ ဒီလောက် မဖြစ်လောက်ဘူးဗျ..
တစ်ကယ်ဟုတ်ရင်တော့ အဲလို မပြောသင့်ပါ…လို့ ..ပဲ….
အဲ့ဒီ ဂျာနယ်တိုက် ပိုင်ရှင်(သို့) ကျောထောက်နောက်ခံက ဘယ်သူတွေလဲ?
NLD ကို တိုက်ခိုက်ချင်တာလား ၊ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလား? သတင်းထောက်က ဘာအမှားလုပ်မိသေးလဲ ?
သတင်းယူပါတယ်… ဒါကြောင့် ကိုကျော်စိုးနိုင် နဲ့ သတင်းထောက်တို့ဖြစ်တဲ့ ပြသနာကို အစအဆုံး သိရှိမြင်တွေ့လိုက်ရသ
လို ပြသနာကြီးးးမလာအောင် ကိုကျော်စိုးနိုင် နဲ့ သတင်းထောက်တို့ကြားမှာ တောက်လျှောက်မတ်တပ် ရပ်နေခဲ့ပါတယ်…
Express Times ဂျာနယ်၏ စွပ်စွဲချက် တွေဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်စိုးနိုင် မှ ” ဟေ့ကောင် ဓါတ်ပုံမရိုက်နဲ့” တားမြစ်တာ
မဟုတ်ပါ။။။ တခြားပွဲလာသူများရှေ့မှာ မီဒီယာပေါင်း များစွာက ပိတ်ကွယ်နေတာကြောင့် တော်ပါတော့ တော်ပါတော့ … ပြီး
မှ ဆက်ရိုက်ပါဆိုပြီးးး ပြောခြင်းးးပါ… ကျန်တဲ့ သတင်းထောက်တွေ နောက်ဆုတ်ပေးပေမယ့် Express Times ဂျာနယ် သ
တင်းထောက်ကတော့ နောက်မဆုတ်တာကြောင့် အခုတော့တော်သင့်ပြီညီလေး ပြီးမှ ဆက်ရိုက်လို့ပြောတာကြားလိုက်တယ်…
က သတင်းထောက်.. ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရမှာပဲလို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်… Express Times ဂျာနယ်၏ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကာထားတဲ့ “ဟုတ်
ကဲ့ပါ…ကျတော် ဒီတစ်ပုံလောက် ရိုက်ပါရစေ ” ဆိုတဲ့ စကားကို သတင်းထောက်က လုံးဝမပြောခဲ့ပါ။။။
အမှန်က ကျတော်လဲသတင်းထောက် အနေနဲ့ သတင်းယူနေရင်းပဲ တွေးကြည့်ပါတယ်… သတင်းထောက်တွေ
က အမေစု ရဲ့ လက်တစ်ကမ်းးးမှာပါ… သတင်းထောက်ဆိုတာကို ထင်ရှားစွာ သိနိုင်တဲ့ အမှတ်အသား ဂျို မပါပါဘူး… ဒီတော့
သတင်းထောက်ယောင်ဆောင်ပြီး အမေစု ကို လုပ်ကြံမယ်ဆိုရင်တောင် အင်မတန် လွယ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတယ်… မဖြစ်နိုင်ဘူးး
လို့ ဘယ်သူပြောမလဲ… ဗိုလ်ချုပ် ကိုတောင် လူယုတ်မာတွေက ဒီလိုပဲ သတ်ခဲ့တာပဲ…
ပြီး ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပါတယ်… ဒီလိုမျိုးတော့ သတင်းထောက်အလုပ်ကို မာန်တက်ပြီး အညိုးထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး…
ဆုံးဖြတ်တာပါ… Express Times ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာချုပ်က NLD ရုံးကို တရားဝင် စာရေးတိုင်ကြားတာကို ကြိုဆိုပါတယ်..
ချက်မှာ ကပ်ပြီး လူသိရှင်ကြား သတင်းဖြန့်ဝေပြောဆိုခြင်း တို့ကတော့ မသင့်တော်ပါဘူး… မီဒီယာ လက်နက်ကို အလွဲသုံး
Facebook ကနေတွေ့တာကို တိုက်ရိုက်ကူးတင်လိုက်တာပါ။ ( ဟုတ်/မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး)
၈ ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းးးရဲ့ လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ကျတော်လဲတက်ရောက်
သတင်းယူပါတယ်… ဒါကြောင့် ကိုကျော်စိုးနိုင် နဲ့ သတင်းထောက်တို့ဖြစ်တဲ့ ပြသနာကို အစအဆုံး သိရှိမြင်တွေ့လိုက်ရသ
မဟုတ်ပါ။။။ တခြားပွဲလာသူများရှေ့မှာ မီဒီယာပေါင်း များစွာက ပိတ်ကွယ်နေတာကြောင့် တော်ပါတော့ တော်ပါတော့ … ပြီး
မှ ဆက်ရိုက်ပါဆိုပြီးးး ပြောခြင်းးးပါ… ကျန်တဲ့ သတင်းထောက်တွေ နောက်ဆုတ်ပေးပေမယ့် Express Times ဂျာနယ် သ
တင်းထောက်ကတော့ နောက်မဆုတ်တာကြောင့် အခုတော့တော်သင့်ပြီညီလေး ပြီးမှ ဆက်ရိုက်လို့ပြောတာကြားလိုက်တယ်…
အမှန်က ကျတော်လဲသတင်းထောက် အနေနဲ့ သတင်းယူနေရင်းပဲ တွေးကြည့်ပါတယ်… သတင်းထောက်တွေ
ပြီး ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပါတယ်… ဒီလိုမျိုးတော့ သတင်းထောက်အလုပ်ကို မာန်တက်ပြီး အညိုးထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး…
ကျတော်မြင်တာကတော့ အမှုတစ်ခုဖြစ်ရင်တောင် တရားရုံးမှာ သူဘက် ၊ ကိုယ့်ဘက် လျှောက်လဲချက်တွေနဲ့ အမှားအမှန်
. ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှန်တယ်၊ ဘယ်သူမှားတယ် အဖြေမစစ်ရသေးဘဲ ကိုယ့်သတင်းထောက်ပြောတာကိုပဲ အမှန်လုပ်ပြီး ဦး
ချက်မှာ ကပ်ပြီး လူသိရှင်ကြား သတင်းဖြန့်ဝေပြောဆိုခြင်း တို့ကတော့ မသင့်တော်ပါဘူး… မီဒီယာ လက်နက်ကို အလွဲသုံး
ဆောရီးပါဗျာ……….ကျွန်တော်ကလည်း Facebook မှာတွေ့တာကို ကူးပြီးတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ (တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်) ကိုထုံးဘဲဥနဲ့ သွားတူနေလို့ပါ …………… သူကြီးရေ ……တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ….ကျွန်တော်ရေးတာကို ပြန်ဖျက်ပေးပါနော်…. Sorry ပါဗျာ……….
အဟီး သူကြီးကလည်း ကူးပြီးတင်တယ်။ ဆြာထုံးနဲ့ ဆြာ ဒေးတို့ကလည်း ကူးတင်ကျတယ်။
ဘာဖြစ်ရဲ ကူးတင်တာခြင်းအတူတူ တောင်းပန်မနေပါနဲ့… ၂ခါဖတ်တော့ ၂ခါ မှတ်မိတာပေါ့..။
အမွှေ အနှောက် ကျွမ်းတဲ့ သူကြီး ဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ပြောထားတာတွေ သူလဲ သိမှာပဲ
တင်ပေးတာ တခြားရည်ရွယ်ချက်တော့ ရှိမယ်ထင်ရဲ့
ဒီ လို ပြသာနာမျိုး ကြာလေ တွေ့ရလေ ဖြစ်မှာပဲ
ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်လုပ်ကြတာ ဆိုပေမဲ့ ၊ မျက်တောင်တစ်ဆုံး မကြည့်ပဲ မျက်စေ့တစ်ဆုံး ကြည့်ဘို့လိုမယ်
ပါးပါးနပ်နပ် မရှင်းနိုင်တဲ့ ဘက်ကတော့ ပေးဆပ်ရတာ များနိုင်တယ်
မေလ ၈ရက်နေ့က တာမွေ မြို့နယ်ရုံးခွဲဖွင့်တယ်။ ဗညားဒလ လမ်းမကြီးကို နေ့လည်၁နာရီလောက်ကတည်းက လူတွေအုံပြီးပိတ်နေလိုက်တာ ညနေ ၅နာရီလောက် ဘွားတော်လာတော့ လုံးဝပိတ်သွားတယ်။ ကားတွေနဲ့လာကြတဲ့ NLD တံဆိပ်တပ်ထားတဲ့လူတွေက လမ်းပေါ်မှာ တပ်ပြီးရပ်နေကြတော့ အများသူငါလည်း လိုက်ရပ်ပြီး အဓိကလမ်းမကြီးပိတ်သွားတာပဲ။
ညနေရုံးဆင်းချိန်၊ တာမွေ၊ရန်ကင်း၊သင်္ဃန်းကျွန်း၊သုဝဏ္ဏ၊တောင်ဥက္ကလာ မြောက်ဥက္ကလာ ကိုပြန်တဲ့အလုပ်ဆင်းသူတွေ အဲဒီဘက်တွေကနေ မြို့ထဲဘက်ပြန်သူတွေ အားလုံးအကြီးအကျယ် ပိတ်ဆို့သွားကြတယ်။ တာမွေရုံးခွဲ ကျောက်မြောင်းဈေးနား ဓါတ်တိုင်နှစ်တိုင်စာလောက်မှာ လူတွေပိတ်ရပ်နေတာနဲ့ လမ်းမကြီးတွေအားလုံး ကသောင်းကနင်းဖြစ်သွားတာ ၆နာရီခွဲလောက်မှ အားလုံးရှင်းသွားတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို ဆင်ခြင်သင့်တယ်။ လမ်းမပေါ်နိုင်ငံရေးတွေကို လျှော့သင့်နေပြီ။
လူထုကို ဂရုမစိုက်ပဲ လမ်းပိတ်ချင်တိုင်းပိတ်တာမျိုးကတော့ နည်းနည်းလွန်တယ် လို့ထင်တာပဲလေ။ တစ်နေ့ကလည်း လသာရုံးဖွင့်ပွဲကို မဟာဗန္ဓုလ လမ်းမကြီးပိတ်သွားအောင် လုပ်လိုက်ကြသေးတာပဲ။ လာမယ့် NLD ညီလာခံကြီးမှာ ဘာတွေ ပြောပြီး ဘာတွေ တကယ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြမလဲ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ ဒီမိုကရက်တွေလည်း ထင်ရာ လျှောက်လုပ်တာပဲ လို့ နားမလည်သူတွေ အပြောခံရရင် ကိုယ်ပါနာမိလို့ပါ။
NLD က ရုံးဖွင့်ပွဲလုပ်မယ်ဟေ့.. လာတဲ့လူမှန်သမျှ တယောက် ၅၀၀၀၊ ဖုန်းတလုံး ပေးမယ်လို့ မက်လုံးတွေ ပေးပြီး ခေါ်တာမှ မဟုတ်တာဗျာ..
ရုံးဖွင့်ပွဲပါဆို ရုံးခန်းနေရာမှာပဲ လုပ်ရတော့မပေါ့.. လူထုကို ဂရုမစိုက်ဘဲ လမ်းပိတ်ချင်တိုင်း ပိတ်တယ်လို့ပဲ ကိုကိုရယ်..
လမ်းမပေါ်နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘဲ ကွင်းပြင်ထဲလုပ်တုန်းကရော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တရားဟောဖို့ နေရာရှာတုန်းက အဖြစ်တွေ .. ပြောတော့ပါဘူးဗျာ..
ဟိုဘက်ဒီဘက် မျက်တောင်တစ်ဆုံးမကြည့်ဘဲ မျက်စိတစ်ဆုံး ကြည့်ကြပါဗျာ..
လမ်းပေါ်နိုင်ငံရေး ခေတ်မရှိဒေါ့ဘူးဆိုဒါ ကြံ့ဖွတ်တွေနဲ့ လက်တဆုပ်စာ စီးပွားရေးဂွင်မိနေသူတွေ သွေးရူသွေးတန်း ပြောဒဲ့စဂါးပါ…။ လူထုရှိနေသ၍၊ ဖိနှိပ်တဲ့ အစိုးရဒွေ ရှိနေသ၍ လမ်းပေါ်နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲ ဘယ်တော့မှ ကုန်မသွားဘူး…။
သတင်းထောက်တွေမှာ အသံဖမ်းစက်တွေ ပါကြပါလိမ့်မယ်။
အသံဖိုင် တင်လိုက်ရင် အဖြေထွက်ပါပြီ။
ဒီပုံတိုင်းအဆိုရင် အန်အယ်ဒီ အနေနဲ့ ပြန်ပြီး ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။ ကျုပ်ကတော့ အဲဒီ အိတ်ပရက်တိုင်း ဆိုတဲ့ ဂျာနယ် ကို တော်တော်လေး ချဉ်သွားပါပြီဗျို့ ။
အဲ .. ဘယ်သူက အမှား ..
ဘယ်သူက အမှန်ဆိုတာ …
မသိတော့လည်း အခက်သား …
ပညာတတ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ..
ဒါမျိုးကို ပြောတာ နေမှာ …
ဘယ်သူမှားပြီး ဘယ်သူတွေမှန်ကြတာလဲဗျာ …??? facebook မှာတွေ့တာနဲ့ ကူးတင်လိုက်တာပါ..
ကိုမောပြေ The Voice Weekly ကို အလုပ်သင် သတင်းထောက်အဖြစ် စရောက်လာစဉ်ကတည်းက အချိန်တွေကို ကျွန်တော် သတိရမိပါသေးတယ်။ သတင်းဆိုရင် လောဘအလွန်ကြီးတတ်တဲ့ သတင်းထောက်ပေါက်စအဖြစ်လည်း အဲဒီအချိန်ကတည်းက ရာထူး အဆင့်အတန်းတွေရယ်၊ အကြီးရယ်၊ အငယ်ရယ် မခွဲခြားဘဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို ယနေ့အထိ ဆက်ဆံခဲ့ပါသေးတယ်။ ခင်ဗျားသိမှာပါ ပြောမနာ၊ ဆိုမနာပုံစံမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံဖူးတာ။
ကိုမောပြေရဲ့ သတင်းထောက်သက်တမ်း သမိုင်းတစ်လျှောက်၊ ဘာတွေလုပ်ပြီး ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာက အစ ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားလဲ သိမှာပါ။
အခု ခင်ဗျားက အဖြစ်မှန်ကို တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်နော်။ မနေ့က အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာတုန်းက အခြားသက်သေတွေ ဖော်ပြတော့ ခင်ဗျား တိတိပပ ဘာမှ မချေပနိုင်ခဲ့ဘူး။
အခုမနက်လည်းကျရော ခင်ဗျားက ကိုယ်တွေ့ဆိုပြီး စာတစ်စောင်ရေးခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားမှာ သက်သေတွေများရှိမလား လို့တော့ သိချင်မိတယ်။
ပေါင်းလာခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းပီပီ ခင်ဗျားတော့ အကွက်ထွင်ပြီလို့ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။
တစ်ချို့ကိစ္စတွေကိုတော့ ခင်ဗျားကို ထောက်ထားပြီး ဖွင့်မချတော့ပါဘူး။ ခင်ဗျားလိုမှ မလုပ်ရက်ပဲကိုး။
ခင်ဗျား ပို့စ်နဲ့ အခြားပို့စ်တွေမှာတွေ့တဲ့ ကွန့်မန့်တွေကို ဖြေရှင်းချင်လို့သာ ဒီစာကို ကိုယ့်ဝေါမှာ တက်ရေးရတာတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
နံပါတ် ၁ က ခင်ဗျားလည်း သိမှာပဲ ကျွန်တော်က ပါတီလက်ကိုင်တုတ်၊ အစိုးရလက်ကိုင်တုတ်၊ အဖွဲ့အစည်းလက်ကိုင်တုတ်လို့ သံသယရှိရင်ပဲ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာ၊ လုပ်ငန်းမျိုးမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့မဆိုထားနဲ့၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားမယ်ဆိုတာမျိုးတောင် မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ။
နံပါတ် ၂ က ကြံဖွံ့ဂျာနယ်လို့ လူတွေထင်နေကြတယ်။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ခင်ဗျားပို့စ်ကို တာဝန်ယူတဲ့ အနေနဲ့ အဲဒီကွန့်မန့်မျိုးတွေကို ခင်ဗျားခြေဖျက်ပေးသင့်တယ်။
နံပါတ် ၃ က အခု ဒီဂျာနယ်ကို ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်ကမှ ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း ကြိုးဆွဲနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Weekly Express Times ဆိုတဲ့ သတင်းဂျာနယ်ကို ထမင်းအငတ်ခံနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်ထုတ်နေတယ်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ထုတ်နေတာ။
နံပါတ် ၄ က တစ်ချိန်က ဦးအောင်ဇော်မြင့် ပိုင်ခဲ့ဖူးတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ထုတ်ဝေသူက ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပါ ကိုမောပြေ။ ဘယ်သူ့ဆီက ပိုက်ဆံမှ မရပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းပြောရရင် ခင်ဗျားနိုင်ငံရပ်ခြားကရတဲ့ စာမူခလောက်တောင် ကျွန်တော့် အကျိုးအမြတ် မရှိပါဘူ။
နံပါတ် ၅ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီကို ထောက်ခံရင် နိုင်ငံရပ်ခြားက စပွန်ဆာကောင်းကောင်းရမှာပဲ ဆိုတာမျိုး မျှော်လင့်နေရင်တော့ ခင်ဗျား မီဒီယာသမားမလုပ်နဲ့တော့လို့ အကြံပေးပါရစေ။
နံပါတ် ၆ က တစ်ဖက်သက်ကြေညာချက်ထုတ်တယ်ဆိုတာထက် တရားဝင်ကန့်ကွက်စာပို့တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော့်စာမှာ အရှင်းကြီးပါနေတာပဲ။ မှန်တယ်။ မှားတယ် နှစ်ဖက်စုံစမ်းပြီးရင် အမှန်တရားက ဘယ်မှ မပြေးပါဘူး။ အခွင့်ကောင်းယူ နာမည်ကြီးချင်ရင် သူငယ်ချင်းပေါ်မှာတော့ အမြတ်မထုတ်ပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ပါရစေ။
နံပါတ် ၇ န၊ အ၊ ဖ အရေခွံလဲ ကြိုးကိုင်တဲ့ သတင်းဌာနလို့ အချို့က စွပ်စွဲကြတယ်။ ကျွန်တော့်နာမည်ကို ထပ်ကြေညာပါရစေ။ ကျော်ကျော်မင်းပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ။ ဘယ်တုန်းကမှ တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်တာမျိုး မခံခဲ့ဘူးဖူး။ ခုလဲမလုပ်ဖူး။ နောင်လဲမလုပ်ဖူးဘူး။ ကြိုက်သလို စုံစမ်းပါ။ ကိုမောပြေလဲ သိမှာပါ။ ကျော်ကျော်မင်းဆိုတဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ ကိုမောပြေ သိပါတယ်။
နံပါတ် ၈ ခင်ဗျားအမြတ်ထုတ်တာ အရေးမကြီးပါဘူး။ ကိုမောပြေ ခင်ဗျားကြောင့် မီဒီယာတွေအပေါ် ပြည်သူတွေ အထင်လွဲရင် ခင်ဗျားမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာလေး ခင်ဗျားကို သတိပေးချင်တယ်။ ငခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးမပုတ်စေချင်ဘူးဗျာ။
နံပါတ် ၉ က ဦးခင်ရွှေဆို ခင်ဗျားတို့ ဘာမှ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထက်ထက်မိုးဦး တုန်းက ဘာလို့ ပါးစပ်ပိတ်နေလည်းဆိုတဲ့ ကွန့်မန့်တွေ တွေ့တယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားသိပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ ပြသနာတက်နေတုန်းက ကျွန်တော်တို့ The Voice Weekly မှာရှိစဉ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ The Voice Weekly နှစ်ပတ်တောင် အပိတ်ခံခဲ့ရသေးတယ်။ ဦးခင်ရွှေရဲ့ မီဒီယာသမားတွေကို ဝေဖန်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်တော့ရော ကျွန်တော်တို့ လူနှစ်ရာကျော် လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားပါ၊ မပါ မသိဘူးနော်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့တာလေးကို ပြောတာ။
နံပတ် ၁၀ က ခင်ဗျားအပါအ၀င် တစ်ချို့က အန်တီစုကို ထိခိုက်မှာစိုးလို့၊ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ ရှေ့ရေးကို ထိခိုက်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး ကျွန်တော့် ဆီဖုန်းဆက်ကြတယ်။ ကျိတ်ပြီး ဖြေရှင်းလိုက်ပါလားလို့လည်း အကြံပေးတယ်။ ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ပါဦး အန်အယ်လ်ဒီက နောက်ဆို အာဏာရပါတီ ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေရှိတယ်။ ကျိန်းသေတယ်လို့ လူတိုင်းယုံကြည်နေတာပဲ။ ခုကတည်းက ကိစ္စသေးသေးလေးတွေဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာပီပီမရပ်ဘဲ ကျိတ်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုရင် နောင်ရော —— မီဒီယာဆိုတာက အမှန်တရားအတွက်ရပ်ရမယ်လို့ ခင်ဗျား သင်ကြားဖူးတာပဲ။ အမှန်တရားအတွက်ရပ်မှာလား။ ဟိုလူ့ဆိုရင် ကြိတ်ဖြေရှင်း၊ ဒီလူ့ဆိုရင် အော်ချက်လုပ်၊ ဟိုအဖွဲ့အစည်းဆို တိုးတိုးတိတ်တိတ်ညှိနှိုင်း၊ ဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုရင် တရားစွဲဆိုတာမျိုးလုပ်သင့်ပါသလား။
နံပါတ် ၁၁ မီဒီယာတွေက ခုမှ အမေစုက တူတူတန်တန် ဆက်ဆံလို့ လူပါးဝတယ်ဆိုတာမျိုး တွေ့မိပါတယ်။ မီဒီယာ ဆိုတာက နှိပ်ကွပ်ခံရစဉ်မှာလည်း မီဒီယာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ တူတူတန်တန် ဆက်ဆံခံရတော့ ၀မ်းသာတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဖမ်းဟယ်၊ ဆီးဟယ်လုပ်တုန်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာအလုပ်တွေကို ပီပီသသလုပ်ခဲ့ဖူးတာပဲ။ ထောင်ထဲရောက်သွားခဲ့တဲ့ သတင်းသမားတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးတာ ခင်ဗျားသိပါတယ်။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်တောင် အချုပ်ခန်းထဲရောက်နေတဲ့ အချိန် ဘယ်သူလာထုတ်ပေးတာတုန်း။ ကျွန်တော့်အကိုပဲ မဟုတ်ဖူးလား။ ခင်ဗျားမှတ်မိပါတယ်။ ညကြီးသန်းခေါင် ဘယ်သူက လာပြီးခင်ဗျားကို ကူညီကဲ့သတုန်း ကိုမောပြေ။ ဇာတ်တူသားမစားကောင်းပါဘူးဗျာ။
ခင်ဗျားရေးထားတာမဆိုးပါဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအနုပညာလည်း တကယ်မြောက်တယ်။ ဒါလည်း ခင်ဗျား ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ပြောချင်တာတစ်ခုက အမှန်တရားကတော့ ပေါ်ထွက်လာဦးမှာပါ။ အဲဒီတော့ အဖြစ်အပျက်က ဘယ်ဟာမှန်တယ်။ ဘယ်ဟာမှားတယ် ဆိုတာအခု အငြင်းမပွားချင်ဘူး။ ကိစ္စပြီးရင်တော့ မှားတဲ့သူဘက်က တောင်းပန်ကြေးပေါ့။ ခင်ဗျားကြောင့် နစ်နာသွားသမျှကိုလည်း ခင်ဗျားတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အဟက် အဟက် … ရယ်ရလွန်းလို့ … နှပ်ချေးတွေတောင် ထွက်မိပါရဲ့ … ဘာတဲ့ … နံပါတ် ၃ က အခု ဒီဂျာနယ်ကို ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်ကမှ ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း ကြိုးဆွဲနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Weekly Express Times ဆိုတဲ့ သတင်းဂျာနယ်ကို ထမင်းအငတ်ခံနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်ထုတ်နေတယ်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ထုတ်နေတာ။ တဲ့လား …. ပြည်သူတွေကို အခမဲ့ထုတ်ပေးပြီး ဗဟုသုတပေးနေသယောင်ယောင် ရေးသားချက်က သာဓုခေါ်ချင်စိတ်တောင် ဖြစ်မိပါရဲ့ .. အဟက် .. အဟက် … အဟက် ….
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ရလျှင်တော့ …. အနာပေါ် ဒုတ်ကျလို့ ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေ ဖော်နေတာလို့ မြင်မိတယ် .. .ဘယ်နှယ့် ထောင်ကျလို့ လိုက်ကူညီပေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါသေး .. သူ့အစ်ကို လိုက်လုပ်ပေးတာ . သူလုပ်ပေးနေတာ ကျနေတာပဲ … အရမ်းကို သဘောကောင်းတဲ့ အယ်ဒီတာကြီးရယ် .. အဟက် ဟက် ….
လူပုံအလယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါပဲ .. တခြား မီဒီယာသတင်းဌာနက သတင်းထောက်တွေလည်း … အနားမှာ ရှိနေမှာကြောင့် … မကြာခင် အမှန်တိုင်းသိခွင့်ရမယ်ထင်ပါရဲ့ …. ။
၂ ယောက်တည်း လူမသိ သူမသိ ဖြစ်တဲ့ပြသနာဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်က လိမ်နေရင် အမှန်ဘာလဲဆိုတာ သိဖို့ခက်ပါတယ်။ အခုကတော့ လူအများကြား၊ လူမြင်ကွင်းမှာ၊ မီဒီယာ သမားတွေ အများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြသနာမို့ အမှန်သိဖို့လွယ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Green Rose အမြင်မှာတော့ မီဒီယာသမားပီသတဲ့ မီဒီယာသမားတွေ ရှိနေသရွေ့ အမှန်တရားကို Green Rose တို့ သိရမှာပါ။ နောင်လည်းအလားတူ ပြသနာမျိုးတွေ ပေါ်လာဦးမှာပါ။ လူတွေ အုံလိုက်ကျင်းလိုက် စုဝေးနေတဲ့နေရာတွေမှာ ပြသနာဆိုတာ အနည်းနဲ့ အများပေါ်တတ်ပါတယ်။ Green Rose စဉ်းစားမိသလောက်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ လူထုကြားထဲမှာ သွားလာနေတာတွေ တတ်နိုင်သရွေ့ လျှော့ချရမယ်ထင်တယ်။ သွားရမယ်ဆိုရင်လည်း လုံခြုံရေးအတွက် စိတ်ချရအောင်တော့ Safe side ယူပြီးမှ သွားလာသင့်တယ် ထင်တာပဲ။ လူထုကချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပေမယ့် အားလုံးတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ရှေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်က လက်တွေ့ သင်ခန်းစာ ပေးသွားပြီးသားပါ။ အသက်နဲ့ရင်းပြီး ပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတိမထားမိလျော့သလားပဲ။ ဟင်း.. .. စိတ်မောပါတယ်။ အခုကိစ္စမှာတော့ Weekly Express Times သတင်းဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ ဦကျော်ကျော်မင်း ပြောထားတာတွေက ပိုပြီးများ ရေရေရာရာ ရှိသလားလို့ ( ဒါပေမယ့် အဲဒါက Green Rose တို့လို ဂေဇက်အဖွဲ့ဝင် တွေအနေနဲ့ အဲလိုမျိုး ထင်မြင်ချက်တစ်ခုကို အထောက်အထားမရှိပဲ ပေးလို့မရဘူး ထင်တယ်နော်) NLD ဘက်က တာဝန်ရှိသူတွရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။
(1) ဂျိတ် ဂျိတ်ခြင်းမို့ ချိတ်ကြတာပါဘဲ ။ ဘယ်သူမှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာတော့ ကိုယ်က အဲ့ဒီ့နေရာ မရှိလို့ မသိပါဘူး ။ သို့သော်လည်း သတင်းသမားများနဲ့ NLD ကြား ပြဿနာလေးတွေရှိနေတယ် ဆိုတာတော့ သိတာပါတယ် ။ Weekly Eleven ကလည်း မကျေနပ်စကား ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရဘူးပါသည် ။
(၂) ဘာတွေ ဘယ်လောက်ပြော ပြော NLD အနေနဲ့ က အနေအထိုင် အပြောအဆို အရမ်းဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါသည် .။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အများက အစိုးရစစ်တပ် ကြံ့ဖွတ်ကို လူဆိုး ၊ NLD ကို လူလိမ္မာ အဖြစ်မြင်ကြလို့ဘဲ ။ လူဆိုးဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုပြီး တစ်တစ်ခွခွ ဆဲ့ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ လူလိမ္မာ ကို သူတို့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မြင်ခြင်ကြတယ် ။ အဲ လူလိမ္မာ ကပါ သူတို့နဲ့ ဘာမှ မထူးဘူးဆိုတာကို အဖြစ်ခံလို့ မရတဲ့ အတွက် NLD ဟာ စစ်တပ်ကြံ့ဖွတ် လို နေထိုင်လို့ မရဘဲ သတိထားနေနိုင်မှ တော်ကာကြပါမယ့်။ ချစ်လို့ ခွင့်လွှတ်တာက တစ်ခြား ။ ကြံ့ဖွတ်တွေ ပြန်လက်ညိူး မထိုးနိုင်အောင်လည်း နေရဦးမယ်လေ။
(၃) နောက်ဆုံးတစ်ခု ကတော့ NLD က သတင်းမထုတ်ပြန်တာဘဲ ။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ လိပ်စာတွေက NLD ဟာ မဟုတ်လို့လားတော့မသိဘူး ။
အကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်တာတွေကို ဘယ်တော့မှ သူတို့စာမျက်နှာတွေမှာ မတွေ့ရဘူး ။ အားနည်းတာလား ၊လူထု ကို ဂရုမစိုက်တာလားတော့မသိဘူး ။ ဥပမာ။။ လွှတ်တော်မတက်တဲ့ ကိစ္စဆိုလည်း ဘာမှဖြေရှင်းထားတာ မရှိ၊ အခြားဂျာနယ် ကလိုတာတွေ ဖြတ်ထည့်ထားတာမျိုးဘဲဖတ်ရတယ် ။ NLD ရဲ့ အာဘော် တိတိကျကျကို မသိရဘူး ။ အခုလို ကိစ္စမျိုးဆိုလည်း လူထု အရမ်းစိတ်ဝင်စားတာမျိုးကို ဖြေရှင်းပေးထားတာမျိုး မရှိဘူး ။ လုံးဝ အားမရဘူး ။
ဒီမှာတော့ ပြန်ဖြေရှင်းထားတာပဲ ဖတ်တော်မူပါ။ facebook ကပါ။
(အောက်က စာတွေအားလုံးဟာ ဘဘဦးတင်ဦး ဒီကနေ့ ပုဇွန်တောင်မှာပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းအတွင်းက Express
Times ဂျာနယ်၏ လက်ရှိ စွပ်စွဲချက် အပေါ် လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးတဲ့ အနေနဲ့ ထည့်သွင်း
ပြောကြားချက်တွေပါ… ကွင်းစ၊ ကွင်းပိတ် အပြင်က စာသားတွေဟာ ကျတော် မူဝါဒ တစ်လုံးမှမပါဘဲ ဘဘ ရဲ့
ဒီကနေ့ မိန့်ခွန်းကို မပြုမပြင် မူရင်းအတိုင်း တင်တာပါ… အသံဖိုင် ကျတော့်ဖေ့ဘွတ်သူငယ်ချင်းတွေ လိုချင်ရင်
တော့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ကျတော် လာပေးမယ်… )
ဒီနေရာမှာ ကျတော်ကတော့ လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မျှမျှတတ ပြောရပါမယ်… မနေ့ညက
ကျတော်သတင်းနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပြည်ပမီဒီယာတစ်ခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့လုံခြုံရေးလိုက်
နေတဲ့ ပုဂိုလ်တစ်ယောက်ဟာ သတင်းထောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကိုသူတို့ကနေပြီးတော့
သတင်းထောက်များရဲ့ MJN ခေါ်တာပေါ့…သူတို့က မီဒီယာကနေပြီးပြောသွားတဲ့ အဓိပါယ်မှာကတော့ဖြင့်ရင် ကျ
တော်တို့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့က ပုဂိုလ်ဟာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ပါတ်သတ်
လို့ လုံခြုံမှုယူတဲ့သူတွေကို စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ ဆိုတဲ့ အပြောကျတော်ကြားလိုက်ပါတယ်… ဒီနေရာမှာ ကျတော်
ဟာ မျှမျှတတ ပြောပါရစေ လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ ကျတော်တို့
အားလုံးရဲ့ အသက်တမျှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ ခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်…ဟေးးး ဖြောင်းဖြောင်း
ဖြောင်း (ပရိသတ်၏ တခဲနက် လက်ခုတ်သံ)… အဲ့ဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ သက်ဆိုင်ရာ
ပုဂိုလ်တွေမှာ အဓိကတာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာကိုလဲ သူတို့ သဘောပေါက်ပြီးတော့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် လုပ်ပေး
နိုင်သလောက် လုပ်ပေးတာလဲ ရှိမယ်… သို့သော် လုံခြုံရေးဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ပိုတယ်မရှိဘူး… အင်မတန် အ
မြဲတန်း လိုနေတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ တကယ်ကို သတိဝိရိယကြီးမားစွာနဲ့ စောင့်ရှောက်မှသာလျှင် လုံခြုံစွာ
အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်… အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ အရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ မျှမျှတတပြောရရင် သဘော
ကတော့ လုံခြုံရေးယူတယ်ဆိုတာဟာ (အနည်းငယ် စဉ်းစားပြီး) … ခင်ဗျားတို့ အားလုံးသိကြပါတယ် … ဒေါ်
အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ပြည်သူလူထုက တခဲနက်ချစ်မြတ်နိုးတာဟာ ကျိကျိတက်
ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်… ကျတော်တို့ခောတ် မှီပါတယ်…ဒီလိုပါပဲ အလားတူပဲ ပြည်သူလူထုက ရောက်ရာအရပ်မှာ
တိုးကြိတ်၊ တိုးဝှေ့ပြီး သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်အားကိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ပြတာကို တွေ့ဖူးပါတယ်… အဲ့ဒီအခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်
အောင်ဆန်းကလဲ ပြည်သူလူထု အားလုံးရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးမှုကို ယုံကြည်တယ်…သို့သော်လဲပဲ ဒီထဲမှာ မသမာတဲ့သူ
မကြိုက်တဲ့သူဆိုတာ သူ့သဘောကို မသိနိုင်ဘူး…အဲ့လိုအခါမျိုးမှာတော့ ဒီလိုပဲသတိပေးနေရင် လုပ်ကိုင်နေရင်း
ကြားထဲမှာပဲ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်၊ တမျိုးသားလုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်
ဆန်း ဟာ အသက်ပေးလှုရတဲ့အထိ လုပ်ကြံခြင်းခံရပြီး ကျဆုံးသွားရှာခြင်းခံရတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးသိ
တယ်…အဲ့ဒါကြောင့်လဲပဲ တိုင်းပြည်မှာ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပျက်လာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အခက်အခဲ အ
ကျပ်အတည်းတွေဟာ ဒီနေ့အထိရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတာဟာ အဲ့ဒီတုန်းက ရတောင့်ရခဲခေါင်းဆောင်ဟာ မသ
မာ သူတို့၏ လက်ချက်ကြောင့် ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဆိုတဲ့ ပယောဂဟာ ဒီနေ့အထိ ဒုက္ခတွေ၊ သုက္ခတွေ အမျိုးမျိုး
ခံနေရတယ်ဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ် ဟေးးးးးဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းး(ပြည်သူတွေ၏ လက်
ခုပ်သံ) ဒီတော့ဒီနေ့ ကျတော်တို့ဟာ အင်မတန် ကံကောင်းလွန်းလွန်း လို့ ရှားရှားပါးပါး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
လို ခေါင်းဆောင်မျိုးရထားတာကို သူမအသက်အန္တာရယ် ဘေးကင်းရှင်းစေရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားဖို့ဆိုတာ ကျတော်တို့တွေမှာရော ဒီတာဝန်ရှိသူတွေမှာရော တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာ
အားလုံးကို လေးလေးနက်နက် ကျတော်ဒီမှာပြောချင်တယ် ဟေးးးးဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း(ပြည်သူတွေ၏ လက်
ခုပ်သံ) ဒီတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှာ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူတယ် ဆိုတာဟာ ဒီနေရာမှာတင်ယူလို့မရဘူး…အတွင်းစည်း
၀ိုင်းမှာလဲ ယူရတယ်…အလတ်စည်းဝိုင်းမှာလဲ ယူရရတယ်… အပြင်စည်းဝိုင်းမှာလဲယူရတယ်…ဟိုးအဝေးကြီး
ကလာတတ်တဲ့နေရာတွေမှာလဲ ယူရတယ်…ဒီနေရာမှာ ဒုက္ခ သုက္ခပေးဖို့ဆိုတာဟာ အဝေးကြီးကလာပြီး ပေး
လဲရတယ်…နောက်ပြီး အခုခောတ်ခါမှာလဲ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ခောတ်ရဲ့ ကိရိယာ တန်ဆာပလာတွေဟာ အင်မတန်
ဆန်းပြားတဲ့ အတွက် အန္တရယ်တွေဟာကြီးမားပါတယ်…ဒါကြောင့်မို့ အန္တရယ်ကြီးမားတဲ့ အတွက် လုံခြုံစောင့်
ရှောက်ရန်တာဝန်ရှိတဲ့ ကလေးတွေဟာ အင်မတန်ကို ပင်ပန်းကြီးမားစွာနဲ့ အစောင့်အရှောက် ပေးနေရတယ်
လုပ်နေရတယ် ဆိုတာကိုတော့ ပထမ နားလည်စေချင်ပါတယ်…အခု ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ရောက်တဲ့နေ
ရာမှာဆိုရင် ပြည်သူလူထု ဟာ အင်မတန် ချစ်မြတ်နိုးတယ်…အင်မတန် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရှိတယ် … ပန်းဆက်
ချင်တယ်…လက်ဆောင်ပေးချင်တယ်… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့လဲ ကျတော်ဟာ အတူတကွခရီးတွေ အများ
ကြီးသွားခဲ့ဖူးပါတယ်…သူ့ရဲ့စေတနာ ပြည်သူလူထုအားလုံးထံချဉ်းကပ်ပြီး ဖက်လှဲတကင်းနေချင်တယ် ဆိုတာ
ကို ကျတော်ကောင်းကောင်းသိတယ်…သူ့နားကိုလာတဲ့သူ တားတာ ပြုတာကို သူမကြိုက်ပါဘူးးး…သူ့နားလာ
တဲ့ ပုဂိုလ်၊ သူနဲ့ ရင်းနှီးလိုတဲ့ ပုဂိုလ် သူနားချဉ်းကပ်လာတာကို ကာကွယ်တာ သူမကြိုက်ပါဘူး… ဒါကို ကျတော်
ကောင်းကောင်းသိတယ်…သို့သော်လဲပဲ ကျတော်တို့မှာတာဝန်ရှိတာကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့သွား
တာ ၊ လုပ်တာ၊ ကိုင်တာ လွယ်အောင် အနီးကပ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့က ကလေးတွေကိုထားရပါတယ်…ဒီကလေးတွေ
ကလဲ တကယ်သူယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ တောက်လျှောက်သူအသုံးပြုလာတဲ့ ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ အတွက်
ဒီကလေးတွေဟာ ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရာလာရာမှာ အခုမြင်တယ်မလားးး ရောက်
တယ်ဆိုရင် ကြိုပြီး တိုးရယ်ဝှေ့ရယ် နေရာတကာတိုင်းးးပါပဲ…အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ လူအုပ်ကြီးဖြစ်ရင် ကျတော်
တို့က စိုးရိမ်ပူပန်ရစမြဲပါ…အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဒီကိစ္စတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ အပေါ်မှာလဲပဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ကလေးသည် သူ့
ခေါင်းထဲမှာ လုံခြုံမှုနဲ့ပါတ်သတ်လို့ ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့အတွက် သူတို့ဟာ အင်မတန် ပင်ပန်းကြီး
စွာ လုပ်ကိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့လဲ နားလည်ဖို့ဆိုတာ ကျတော်ပြောချင်
ပါတယ်…နောက်တစ်ခါ တစ်ချို့ လုံခြုံရေးယူတဲ့ ကလေးတွေ အနေနဲ့ ပင်ပန်းကြီးလွန်းတဲ့ အခါမှာ သူတို့ဟာ
စိတ်လိုက်မာန်ပါ တွန်းတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်…အဲ့လို တွန်းတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝကလဲပဲ …
တခြားကြောင့် မဟုတ်ပါဘူးး… ဒီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အပိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံးတာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာ ဖြစ်
တဲ့ အတွက် လုပ်ရကိုင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်…တခါ သတင်းထောက်ပိုင်းက ပုဂိုလ်တွေကိုလဲ ကျတော်တို့က မျှမျှ
တတ ပြောချင်တာကတော့ အခုလို ခုနက ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာ ဆိုရင်လဲပဲ ကျတော်တို့ဘက်က အကြောင်း
ချင်းရာအလိုက် ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆင်ခြင်နိုင်အောင် တတ်နိုင်သမျှလုံးပန်းဖို့ သဟဇာတ ဖြစ်ဖို့ ကျတော်
တို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်တာ ရှိပါတယ် … သို့သော် တစ်ဖက်ကလဲပဲ သတင်းစာလောက သတင်းထောက်လော
က ပိုင်းကလဲပဲ တချို့ကလဲ မှန်ပါတယ် တကယ်ကိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံရချင်လို့ သိမ်းထားချင်လို့ တရို
တသေ ထားချင်လို့ ရိုက်တဲ့သူလဲ ရှိတယ်…တချို့ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
ပညကြောင့် ရိုက်ရတာလဲ ရှိတယ်…ရှိတဲ့ အခါမှာ သူတို့ကလဲ အလုအယက်ရိုက်ကြတဲ့ အခါကျတော့ ဒါနဲ့
ပတ်သတ်တဲ့ အပိုင်းမှာတော့ဖြင့် အနီးကပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်သူရယ်ဘယ်ဝါရယ်မသိဘဲ တတ်နိုင်သမျှ
သူတို့က တားရဆီးရတာ ဖြစ်တယ်…အဲ့လိုတားရဆီးရရင်းနဲ့ ကတောက်ကဆ ဖြစ်တယ်လို့ ကျတော်နားလည်
တဲ့ အတွက် ဒါနဲ့ပတ်သတ်တာ အားလုံးကိုလဲ တဘက်က နားလည်ပေးပါလို့ ပြောချင်တယ်…
WeeklyExpress Times ဂျာနယ် သတင်းထောက်အား ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(ဒီချုပ်)က ကိုကျော်စိုးနိုင်က မြစ်မခသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်က သူဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီးတော့ မှတ်တမ်းရရင် တော်ပြီ ညီလေးလို့ပြောပါတယ်၊ သူ ကျွန်တော့်ကို မကြည့်ပဲနဲ့ တံတောင်နှင့် ထိုးမိပါတယ် ကျွန်တော်က နောက်ထပ်ပြောပါတယ်၊ နောက်တစ်ကြိမ် တတောင်နဲ့ ထပ်ထိုးမိပါတယ်”ဟု ကိုကျော်စိုးနိုင်ကပြောသည်။
သတင်းထောက် ဟိန်းကိုစိုးအား ကိုကျော်စိုးနိုင်က ကိုယ်ထိ လက်ရောက်မစော်ကားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း သူ့ထံ တွင်သက်သေများရှိပါကြောင်းဦးကျော်စိုးနိုင်က ဆက်ပြောသည်။
Weekly Express Times ဂျာနယ်က မိမိတို့အနေဖြင့်ပြသာနာတစုံတရာတက်လိုခြင်းမရှိကြောင်း နောင်တွင် ထိုကဲ့သို့
ပြသာနာမျိုးမတက်လို၍ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးသို့ စာပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ သတင်းထောက်ကို မင်းတို့က ပိုက်ဆံရလို့လုပ်နေတာ၊ ငါတို့က ထောင်ကျခံပြီးလုပ်နေတာ လို့ ပြောခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ဖရီးပွဲဆိုတော့ရိုက်မှာပဲလေ ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ရင် သတင်းထောက် တွေအတွက်
နေရာ တစ်နေရာသတ်မှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်” ဟု Weekly Express Times ဂျာနယ်က အယ်ဒီတာ ကိုကျော်ဇေယျာဝင်း က ပြောသည်။
အထက်ပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒီချုပ်ကတာဝန်ရှိသူများက မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလို၍ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ရာ၌ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ယခုကဲ့သို့ဆိုသည်။
“ဒီကိစ္စကို ခြံထဲကလူတွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်မသိပါဘူး ခြံထဲကတာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေဆောင်ရွက် ပါလိမ့်မယ်”ဟု
နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် သတင်းမီဒီယာသမားများသည် ရှောင်ကွင်း၍ ရသူများမဟုတ်သည့်အတွက် ပြေပြေလည်လည် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းဝါရင့်သတင်းစာဆရာ ဆရာမောင်ဝံသက ဆိုသည်။
“ သတင်းသမားဘက်ကလဲ တားမြစ်ထားတဲ့နေရာကို အခွင့်ထူးခံပြီးမသွားသင့်ဘူး၊နောက်တစ်ချက်က သတင်းသမားတွေကို
ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်အကျိုးကို လက်တွဲလုပ်နေတဲ့သူ တွေလိုမျိုး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံသင့်တယ်” ဟု ၀ါရင့်သတင်းဆရာ၊ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အတိုင် ပင်ခံအယ်ဒီတာဆရာမောင်ဝံသကပြောသည်။
သတင်းထောက်နှင့် လုံခြုံရေးသမားများမှာ တခါတလေထိုကဲ့သို့ အဆင်မပြေမှုများဖြစ်တတ်ကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ လူမှုရေးဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာများတွင် ပျံနှံ့စွာဖော်ပြရေးသား လျက်ရှိ ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
NLD နဲ့ Weekly Express Times ဆိုတာထက်
ပါတီတစ်ခုနဲ့ မီဒီယာလို့ ကြည့်ရင်တော့ အမြင်ရှင်းပါလိမ့်မယ်..
အမြင်မှန်မှ အတွေးမှန် အသိမှန်ပါလိမ့်မယ် …။
ပါတီလုံခြုံရေး ဘာတွေဖောင်းသလဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ..
သတင်းထောက် …ဘက်က လုံခြုံေ၇းကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်တွန်းတယ် ထိုးတယ်..ဆိုရင်တော့ ဖောင်းလိမ့်မယ်…
ိုနို့မို့ဆိုရင်တော့ သူမမှားဘူး … သတင်းထောက်ဆိုတာ သတင်းအတွက်ဆို အသက်တောင်စွန့်သွားတဲ့ သာဓကတွေ ရှိတယ်…။ မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ သူသတင်းယူမှာပဲ…။
ဒါဆို လုံခြုံရေးဘက်က ကြည့်ရအောင်
ပါတီခေါင်းဆောင် လုံခြုံရေးဆိုတာ မှန်တယ်… ။ဒါပေမယ့် ဒါတွေက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့် ကိစ္စတွေ …။ သတင်းသမားတွေ မ၀င်သင့်ဘူးထင်ရင် ပေးမ၀င်နဲ့ ..။ ဒါမှမဟုတ် စည်းတားထား … ဘယ်စည်းကိုတော့ မကျော်ပါနဲ့ဆိုတာမျိုး…။ အ၀င်ဝထဲက စေ့စေ့စပ်စပ်ရှာတာမျိုး … စိတ်ချရတဲ့ သူမျိုးကိုပဲ ၀င်ခွင့်ပြုတာမျိုး လုပ်သင့်တယ်…။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ ပါဝါနဲ့ ရောက်ပြီးမှ ဟိုလိုမရိုက်နဲ့ ဒီလို မရိုက်နဲ့ဆိုတာတော့ (ကျွန်တော့်အမြင်) မလုပ်သင့်ဘူး…။
လွှတ်တော်ထဲမှာ သတင်းမီဒီယာတွေ အပေါ်ကပဲ သတင်းယူရတယ်မလား .. အထဲကို မ၀င်ရဘူးလေ…။
၀င်ခွင့်ရတဲ့သူတွေကလဲ သေချာ စိစစ်ပြီးသား သူတွေ..။
နောက် အိမ်သာထဲခေါ်သွားတယ် ၊ ရင်ဘတ်ကို ဆောင့်တွန်းတယ်..။ စကားရိုင်းရိုင်းပြောတယ်…။
(တကယ့် အဖြစ်မှန်သာဆိုရင်) မလုပ်သင့်ဘူး…။ အရမ်းဖောင်းတဲ့ ကိစ္စပဲ …။ အရင်ခေတ်တုန်းက သတင်းထောက်တွေ ဖိနှိပ်ခံရလို့ သတင်းမှောင်ချ ခံရတာ အများအသိပါ…။ထပ်ပြီးတော့ တာဝန်ဆိုတဲ့ အားနဲ့ မဖိသင့်တော့ပါဘူး..။ တခြားမကြည့်နဲ့ မန်းဂေဇက်က CJ တွေတောင် အများမသိအောင် နေနေရတာ မဟုတ်လား…။ငါ CJ ကွဆိုပြီး ဘယ်တုန်းက လက်မထောင်ခဲ့ရလို့လဲ ..။ ကိုယ်ချင်းစာကြပါ…။ သတင်းထောက်အခွင့်အရေးတွေ ပြည့်ပြည့်၀၀ ရချင်နေပါပြီ…။ငွေရလို့ သတင်းထောက်လုပ်နေတာ ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကိုလဲ ကန့်ကွက်ချင်ပါတယ်…။ ကိုယ်နဲ့ နှိုင်းကြည့်ပါ…။ အခန့်မသင့်ရင် နံရံလေးဘက်ကြား ချက်ချင်းရောက်သွားနှိုင်တယ် ဆိုတာပါ…။
သတင်းမှန်ကို ကြိုက်သလို လိုက် … ကြိုက်သလို တင်ပြခွင့်ရရင် မတရားမှုတွေ အများကြီး ပပျောက်သွားနှိုင်ပါတယ်။။။ အဲဒီလို ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ သတင်းထောက်တွေဟာ အခရာ အကျဆုံးပါ…။ သတင်းထောက်တွေကို ဖိနှိပ်တာ .. စော်ကားတာ … တားမြစ်တာ…ဆိုရင် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှ လုပ်ခွင့်မရှိသင့်တော့ပါ…။
တန်ပြန်အားဖြင့် သတင်းထောက်တွေဘက်ကလဲ အဂတိ ကင်းဖို့ လိုပါတယ်…။
နောက်ဆုံးတစ်ခုအားဖြင့် ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒါကို NLD နဲ့ Weekly Express Times ဆိုတာထက်
ဦးကျော်စိုးနိုင် နဲ့ သတင်းထောက်တစ်ဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်အဖြစ် ကျွန်တော် သုံးသပ်ထားတယ် ဆိုတာပါပဲ …
ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး ရေးထားပါသည်…
အားမနာတမ်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ရရင် NLD မှာ အမေစုနဲ့ တခြား လေးငါးယောက်ပဲ
သမားဂုဏ်ပြည့်စုံကြတာ။ ကျန်တာတွေကတော့ တိုက်ပုံလေးဝတ်ပြီး နိုင်ငံရေး ဆရာကြီးလိုလို
ဘာလိုလိုညာလိုလိုနဲ့ အာဝါဒေးတွေများတယ်…။ ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်း ပါဝါပြချင်သေးတယ်။
အမေစုသာ မရှိတော့ရင် အဲ့ဒီ့ အာဝါဒေးသမားတွေများနေတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်အတွက် ရင်လေးမိတယ်ဗျာ။
ဒီကိတ်စကတော့ နှစ်ဖက်လုံးအမှားဖြစ်မယ် အာဝါဒေးလုံခြုံရေးသမားနဲ့ သတင်းသမားတို့
ကစည် ရော့ ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်တစ်လုံး …
Weekly Express Times စပြီး တိုင်တာဆိုတော့
သက်သေအထောက်အထား အပြည့်အစုံရှိဖို့ လိုတယ်ဗျ
သတင်းထောက်ဆိုတော့ အနည်းဆုံး အသံသွင်းထားတဲ့ ဖိုင်..ဒါမှမဟုတ်..ဓာတ်ပုံလေးတော့ ရှိထားသင့်တယ်..
ဒါမှ အခြေအနေအမှန် သိပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ ရမှာ
ဒီကိစ္စ တစ်ကယ်ဖြစ်တယ်လို့ ယုံတယ်
ဒါပေမဲ့…နဲနဲ ပိုပြီး တိုင်ထားသလားတော့ မပြောတတ်..
Express Times ဂျာနယ် သတင်းထောက်နှင့် NLD အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍NLD တာဝန်ရှိသူ ဦးအုန်းကြိုင်အားThe Messenger ဂျာနယ်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်များကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Express Times ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်ကယ်တို့ဆီစာပို့ထား တယ်လို့သိရတယ်။ အန်ကယ်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်သွားမှာလဲ။
တစ်ခုခုပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်းပေးမယ်။ အထက် လူကြီးတွေကို တင်ပြထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ၁၁ နာရီလောက်မှ စာရောက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကနေတဆင့်လူကြီးတွေ ကိုတင်ပြထားတယ်။ လူကြီးတွေ ရဲ့ သဘောထားကို မနက်ဖြန်လေ့လာသွားမယ်။
ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံရေးပါတီပဲ။ ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုမပြေမလည် ဖြစ်နေရင် ပြေ လည်အောင် ညှိနှိုင်းပေးသွားမယ်။ တကယ်လို့ တင်ပြ ထားတဲ့အတိုင်း ဒီဘက်က မှားယွင်းတယ်ဆိုရင် တောင်း ပန်မယ်။ ကျွန်တော်တို့က ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းသွားမယ်။
ဦးအုန်းကြိုင်ရဲ့ ပြောစကား ။ ဦးတင်ဦးရဲ့ ပြောစကားတွေကို NLD facebook ပေါ်မှာ ပိုဖတ်ချင်ပါသည်။
ဘယ်သတင်းဌာန မှာပါသည် ဆိုသည်မှာ ဖြတ်တောက်ထားသလား မသိနိုင်ပါ။
ဟောလိဝုဒ်က.. အလှူငွေ ၁၅သန်းလောက် လာမ, တာ..
ဆိုတော့.. လမ်းတွေပိတ်တာပေါ့..။ အဲဒီဖက်သွားလို့မရဘူး..
ယူအက်စ်မှာ သတင်းသမားက.. လက်မှတ်နဲ့..ဟိုဝင်ဒီဝင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့.. အယ်လ်အေဆို.. LAPD ကသတင်းသမားအတွက် သီးသန့်ကဒ်ပေးမှ… အ၀ါလိုင်းအထဲဝင်လို့ရတာပါ..
အဲလိုကဒ်ရဖို့.. FBI က..၃လလောက်အချိန်ယူပြီး.. နောက်ကြောင်းစစ်ထားတယ်..
By SUSAN ABRAM / DAILY NEWS
Article Tab: image1-Obama in L.A.: Residents brace for traffic headaches
ဘယ်သူနဲ့ မှပြသနာမဖြစ်ဘူး။ဟိန်းကိုစိုးနဲ့ ဘဲပြသနာဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်။
နှစ်ဦးဂျင်း ပုဂ္ဂလိက အငြင်းပွားမှုဂနေ အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ်နဲ့ မီဒီယာအကြား ပြသနာအဖြစ်သို့ ဦးတည်မသွားစေဖို့ အန်တီစုမှ ထိုသူနှစ်ဦးအား ခေါ်ယူပြီး မီဒီယာနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်ဂေါင်းဇောင်များ ရှေ့မှောက်မှာ ချစ်ကြည်ရေး လဘက်ရည်ပွဲ လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရုံမျှမက တဦးနှင့်တဦး နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ နမ်းရှုပ်ကြလျင် နတ် လူ အခြောက် အားလုံး ဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်။
နှစ်ဖက်စလုံး အလုပ်သဘောသဘာဝရ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ဖြစ်မိဂျဒယ်ဆိုပေမဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ လုံခြုံရေး ဦးကျော်စိုးနိုင်ဖက်က တောင်းပန်သင့်ဒယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ။ အစကနဦး လုံခြုံရေးအရ ပြောဆိုတားမြစ်ခဲ့တာ မှန်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းအပြုအမူဂတော့ လုပ်ပိုင်ဂွင့်ထက် ကျော်လွန်လို့သွားပါဒယ်။ မီဒီယာသမား ကိုဟိန်းစိုးဖက်ကလည်း နားလည်မှု ရှိစွာဖြင့် ကျေအေးသင့်ဒယ်၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဖြစ်ခဲ့မှုအတွက် ပြန်လည်တောင်းပန်သင့်ဒယ်။ အမှန်ပြောရရင် အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်များရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများဂို သာမာန်မီဒီယာသမား တယောက်အနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရနိုင် မရဂေါင်းပါဘူး။ နှစ်ဖက် ရှေ့ခရီးအတူဆက်ရ အုံးမှာမို့ ကျေအေးလိုက်ကြပါ။ အခုပြသနာ အတိမ်အနက်နဲ့တော့ မီဒီယာဖက်ကနေ လိုက်ချင်ဒယ်။ အန်အယ်လ်ဒီနေရာမှာ ကြံ့ဖွတ် သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များလို့ ယူဆမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အမှားချင်းအတူတူ မီဒီယာဖက်ကနေ မျက်စိမှိတ်လိုက်ပါမယ်။
ခွေးနှစ်ကောင်ကိုက်လို့ လိုက်ကြည့်တာ … ဘယ်လို လုပ်ငန်းရှင်မျိုးပါလဲ .. ၊ ဘယ်ဘုန်းကြီး ၊သီလရှင်ပါသလဲ … ။ အားအားယားယား အရပ်တကာလှည့် သန်းတုပ် ၊ အတင်းပြောတဲ့ ဆန်ကုန်မြေလေး ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားတွေပဲ လိုက်ကြည့်တာမဟုတ်လား… ။